Booliska Norwey oo maanta soo saaray sharci cusub oo meesha ka saaraya sheekadii muranka dhalisay ee (ukjent) - NorSom News
Booliska Norwey oo maanta soo saaray sharci cusub oo meesha ka saaraya sheekadii muranka dhalisay ee (ukjent)
Hay-ada maamusha booliska Norwey ee Politidirektoratet ayaa maanta soo saartay war qoraal ah oo ay ku sheegayso inay badashay sheekadii muranka weyn dhalisay ee ku saabsaneyd in passportka dadka haysta dhalashada wadanka ee asal ahaan ka yimid 31 wadan loogu qori doono (ukjent) meesha dhalashada. Iyaga oo taas badalkeeda sheegay in meesha dhalashada(fødested) lagu badali doono wadanka dhalashada(fødeland). Taas oo michaneedu yahay in wadanka uu qofka ku dhashay laba jeer lagu qori doono passportka. Booliska ayaa isbuucii hore balan qaaday inay arintan dib u eegid ku sameyn doonaan, kadib buuq iyo muran badan oo ka dhashay in qofka loogu qoro (ukjent) meesha dhalashada.
Politidirektoratet ayaa sidoo kale sheegtay in qofkii la siiyay passport ay ku qorantahay (ukjent), la siin doono passport cusub oo meesha dhalashada ee (ukjent) ku qorantahay lagu badali doono wadanka dhalashada(fødeland). Wuxuuna qofkaas codsan karaa passport cusub sidii caadiga ahayd oo kale, isaga oo aan laga qaadeyn wax lacag ah. Booliska ayaa sidoo cadeeyay in passport ay ku qorantahay (ukjent) uu yahay wali mid shaqeyn karaa ilaa uu ka dhacayo ama uu qofka ka codsanayo passport cusub.
Previous articleSadiq Haibe: Booliska Norwey waxay i waydiiyeen inaan aqaano dad ka yimid Jabuuti, Kenya iyo Ethopia
Next articleBøhler: Qaar kamid ah ajaaniibta waxay shaqada u diidaan sababo la xiriira diin iyo dhaqan.